ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် ငြိမ်းချမ်းရေး ပူးပေါင်း ရန်ပုံငွေ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးH.E.Mr. Kristian Schmidt အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် သည် ငြိမ်းချမ်းရေးပူးပေါင်းရန်ပုံငွေ ဘုတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Kristian Schmidt ဦးစီးဘုတ်အဖွဲ့အား ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ သဘင်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် Joint Peace Fund(JPF) အဖွဲ့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကူညီပံ့ပိုးနေမှုအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်း စဉ်များတွင်လွှတ်တော်၏ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍ၊ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်တည်ဆောက်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ အမျိုးသမီးများ နိုင်ငံရေးတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်မှုမြင့်မား လာစေ ရေး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စွာကျင်းပသွားနိုင် ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြ သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အစိုးရ၏အာမခံ ချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်ညွန့်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ အဖွဲ့ ဝင် ဦးပြုံးချို နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်